Home Wararka Sh. Bashir Salad oo sheegay in AhluSunna & Shabaab isku mid yihiin,...
Sh. Bashir Salad oo sheegay in AhluSunna & Shabaab isku mid yihiin, dagaalkoodana ku baaqay!
Hogaamiyaha Ururka Wahaabiyada ee Al Itixaad/Ictisaam Shiikh Bashiir Salaad ayaa waraysi uu siyay Taleefishinka Univesal TV waxa uu ku sheegay Al Shabaab iyo Ururka Ahlusunna Wajameeca ay isku mid yihiin. Waxa uuna ku baaqay in si wada jira loola dagaalo labadooda.
Hadalka ka soo yeeray Shiikh Bashiir Salaad ayaa ah mid ay la qabaan MW Farmaajo iyo Fahad Yasin oo iyagu gacan saar la leh Ururka Al Itixaad. Farmaajo ayaa horay ugu balan qaaday Shiikh Bashir Salad in uu ka dhigayo mufdiga ugu weyn Soomaaliya. ama Shiikha looga danbeyeyo in uu soo saari kari go’aanada diiniga ah isaga oo isticmalayo awooda dowlada.
Shiikh Bashiir ayaa waxa uu ka mid ahaa ragii hogaaminayay dagaalkii ay Al Itixaad ku qaaday hortaantii sagaashamaadkii Gobolka Gedo iyo deegaano kamida Puntland. Ururka Ahlusuuna ayaa sheegay in ayan la yaabin hadalka ka soo yeeray Shiikh Bashiir, iyaga oo ku tilmamay in uu shiikhu yahay nin diintii ku iibsaday mansab iyo lacago la siiyo. Shiikh Bashir ayaa mudo shan sano ah waxa uu degn yahay Hotelka AL Jazeera kaas oo ay lacagtiisa si buuxda u bixiso dowlada Federaalk Soomaliya.